Triumph Star Travels & Tours Co.,Ltd., No.10/13, Soi Prachachune 30, Prachachune Road, Bangsue, Bangkok 10800, Bangkok (2021)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว > Triumph Star Travels & Tours Co.,Ltd.
မြန်မာပြည့်ကိုပြန်ချင်ကျတဲ့ညီလေးညီမလေးများတွေဒါနဲ့ Viber ဖုန်းနံပတ်ကိုခေါ်ဆိုလာခဲ့ပါ..09678929246..Messengerကိုလဲhiလာပေးလို့ရပါတယ်
Triumph Star Co., Ltd. was founded in 25 October 2016. Currently, we provide the following services.
- Tickets/ Private Package Tour Arrangements in Thailand
- Guide Rental Services
THAILAND REOPENING 🇹🇭
ထိုငျးနိုငျငံကို လာရောကျလိုသူမြား October 1 ,2021 မှစ၍
- ကာကှယျဆေး ၂ကွိမျထိုးပွီးသူမြား
၇ရကျ Q ဝငျရပါမညျဖွဈပွီး RT-PCR test ၂ ကွိမျစဈရပါမညျ။
- ကာကှယျဆေးမထိုးရသေးသူမြား ၁၀ ရကျ
- ကာကှယျဆေးမထိုးနှံရသေးသော ကလေးမြားလညျး ၁၀ ရကျ Q ဝငျရမညျဖွဈပွီး ကာကှယျဆေး ၂ ကွိမျ ထိုးပီးသော မိဘမြားနှငျ့ ခရီးသှားပါက , မိဘမြားပါ ကလေးနှငျ့အတူ ၁၀ ရကျ Q ဝငျရောကျရမှာဖွဈပါတယျ။
Mingalar Bar ! 😊😊
Covid 19 😷😷 အတောတှငျး ပငျြးနကွေပီလား ?
အဲ့ဆိုဒို့ရဲ့Siam Amazing Park Bangkok, Safari World, Dream World တို့လညျးပွနျဖှငျ့နပေီဆိုတော့တရကျတာအပငျြးပွလေေး သှားကွရအောငျ !
💥💥Super Discount !!!!
Covid 19 အတောတှငျး အထူးလကျဆောငျPromotionပေးတဲ့packageလေးရှိတယျနျော
1. Siam Amazing Park Bangkok
Entrance fee + Lunch = 550ဘတျ ,
ကလေး= 450ဘတျ (**အမွငျ့ 90cm အောကျ)
2. Dream World 🎢🎡🎠
- Ride Only = 450ဘတျ
- Ride + Snow Town = 540ဘတျ
**နလေ့ညျစာကတော့Dream World မှာရှိတဲ့မိမိစိတျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ဆိုငျတှမှောဝယျစားလို့ရပါတယျရှငျ
3. Safari World (Safari Park & Marine Park) 🐘🐯🦁🐻🐬🐳
- Safari Park Only = 600ဘတျ
- Marine Park Only = 700ဘတျ
- Safari Park + Marine Park = 800ဘတျ
Remark : Safari Park ကတော့နတေို့ငျးဖှငျ့ပီး Marine Park ကတော့ (Thu, Fri, Sat, Sun) 1ပတျမှာဒီ4ရကျပဲဖှငျ့ပါတယျရှငျ
**နလေ့ညျစာကတော့Safari World မှာရှိတဲ့မိမိစိတျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ဆိုငျတှမှောဝယျစားလို့ရပါတယျရှငျ
ဆကျသှယျရနျဖုနျး : +66634297569 (or) Viber No. +66634297569 (or) Chat box မှတဆငျ့ဆကျသှယျနှိငျပါတယျရှငျ
ထိုငျးမှာတော့ ဒီညကစပီး ညမထှကျရ အမိနျ့(curfew) ကို ရုတျသိမျးလိုကျပီနျော
မကွာခငျမှာ အားလုံး ပုံမှနျပွနျဖွဈလာပီး ခရီးတှေ သှားနိုငျကွဖို့ မငျမငျတို့ လညျး ဆုတောငျးပါတယျ🙏😊
bangkokpost.com The night curfew will end on Monday, but strict controls will continue to be enforced on immigration because Covid-19 is coming from other countries,asenior government spokesman announced on Friday.
[03/11/20] Mingalar Barrr !
🔥🔥Ocean Worldနဲ့Madame Tussaudsရဲ့ super hot promotionလာပါပြီရှင်~
1. Ocean World : 500ဘတ်
2. Madame Tussauds : 400ဘတ်
3. Ocean World + Madame Tussauds : 800ဘတ်
Phone & Viber : 0634297569
ဘန်ကောက်မြို့ , ပတ္တရားမြို့ , ဟွာဟင်, ဖူးခက် မှာရှိတဲ့ ဝင်ကြေးလက်မှတ်များကို ထပ်မံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်~~
👉👉 လတ်မှတ် (၄) စောင် နှင့် အထက် ဝယ်ယူ ပါ က Pratunam Area အတွင်းရှိ ဟော်တယ် များ သို့ Free of Delivery Charges ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်🎁🎁🎁
👉👉 လတ်မှတ် (၄)စောင် အောက် (သို့)လူကြီးမင်း တည်းခိုသည့် ဟော်တယ်သည် Pratunam Area အတွင်း မ ဟုတ်ပါ ကDelivery Charges - ဘတ် ၂၀၀ ဖြင့် ပို့ဆောင် ပေးပါသည်🎁🎁🎁
Siam Park City (All Rides + Buffet Lunch) - ၅၅၀ ဘတ်
Safari World (safari park +marine park +buffet lunch) - ၉၀၀ ဘတ်
Dream World (all rides+snow town+buffet lunch) - ၅၉၀ ဘတ်
Art In Paradise- ၂၅၀ ဘတ်
Sea Life Ocean World Only - ၆၅၀ ဘတ်
Sea Life Ocean World + 4D - ၈၀၀ ဘတ်
Madame Tussauds Only - ၆၀၀ ဘတ်
Sea Life Ocean World + Madame Tussauds + 4D Ice Age - ၉၅၀ ဘတ်
Sea Life Ocean World + Madame Tussauds +4D Ice Age + Ocean Feeding Boat - ၁,၂၅၀ ဘတ်
Baiyoke Sky Hotel Buffet Lunch -၆၂၀ ဘတ်
Baiyoke Sky Hotel Buffet Dinner (76th or 78th floor) - ၇၁၀ ဘတ်
Baiyoke Sky Hotel Buffet Dinner (Crystal Grill Dinner at 82th floor) - ၉၀၀ ဘတ်
Siam Niramit Bangkok Show Only - ၉၅၀ ဘတ်
Siam Niramit Show + Dinner - ၁,၂၀၀ ဘတ်
Chao Phraya Princess Dinner Cruise- ၉၀၀ ဘတ်
White Orchid River Dinner Cruise - ၉၀၀ ဘတ်
Candle Light Dinner Cruise - ၁၂၅၀ ဘတ်
Kidzania Bangkok ( Toddlers 2-3 Years Old) - ၆၅၀ ဘတ်
Kidzania Bangkok ( Kids 4-14 Years Old) - ၉၅၀ ဘတ်
Kidzania Bangkok ( 15 Years Old & Up) - ၆၅၀ ဘတ်
The Marvel Experience_၁၂၅၀ ဘတ်
**King Power Mahanakhon Sky Walk (Promotion 01 Feb -31 March 2019)
(Indoor Only) _၇၀၀ ဘတ် (Indoor + Rooftop)_၉၀၀ ဘတ်
Alcazar Show (Deluxe & Standard Seat) - ၄၈၀ ဘတ်
Alcazar Show (VIP Seat) - ၅၈၀ ဘတ်
Siracha Tiger Zoo - ၂၈၀ ဘတ်
Art In Paradise Pattaya- ၂၅၀ ဘတ်
Cartoon Network Amazon Water Park (High Season_Jan,Feb,Mar,Apr,May)_၉၉၀ ဘတ်
Nong Nooch Garden (Admission Fee Only) - ၄၀၀ ဘတ်
Nong Nooch Garden (Admission Fee+Show) - ၄၈၀ ဘတ်
Nong Nooch Garden ( Admission Fee+Show+Thai Buffet) - ၅၈၀ ဘတ်
Nong Nooch Garden (Admission Fee + Show + Inter Buffet) - ၇၅၀ ဘတ်
Mimosa Show +3 D gallery - ၃၀၀ ဘတ်
Mini Siam - ၂၆၀ ဘတ်
Dolphin World Pattaya Show - ၃၀၀ ဘတ်
Floating Market Pattaya + Boat - ၂၈၀ ဘတ်
Entry Ticket + Overcoat_၃၅၀ ဘတ်
Entry Ticket + Overcoat+Soft Drink_၃၈၀ ဘတ်
Teddy Bear Museum - ၃၀၀ ဘတ်
Under Water World Pattaya - ၃၃၀ ဘတ်
Ramayana Water Park_၉၅၀ ဘတ်
Kaan Show Sky Zone_၈၅၀ ဘတ်
Kaan Show Cloud Zone_၁၀၅၀ ဘတ်
Kaan Show Ocean Zone_၁၀၅၀ ဘတ်
Kaan Show Star Zone_၁၇၀၀ ဘတ်
Upside Down Pattaya_၂၈၀ ဘတ်
Package type 3_ ၅၀၀ ဘတ်
Package type 5_ ၇၀၀ ဘတ်
Package type 7_ ၉၀၀ ဘတ်
Vananava Water Park - ၉၉၀ ဘတ်
Vananava Water Park + Buffet (all include -Locker + Tower + Printed Photo) - ၁၂၅၀ ဘတ်
Venezia Package A - ၂၅၀ ဘတ်
Venezia Package B - ၃၅၀ ဘတ်
Fantasy show + pick up and drop off - ၁,၉၀၀ ဘတ်
Fantasy Show + pick up and drop off + Dinner - ၂,၁၅၀ ဘတ်
Jame bond island - pick up and drop off + buffet lunch + Big boat - ၁,၄၅၀ ဘတ်
Jame bond island -pick up and drop off + buffet lunch + speed boat- ၁,၇၅၀ ဘတ်
Phi Phi island - pick up and drop off + buffet lunch +speed boat -၁,၇၀၀ ဘတ်
အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါ က
Viber No - +66634297569 သို့ Chat box မှ တစ်ဆင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
[10/17/17] Breaking News
ထိုင်းနိုင်ငံဘုရင်ဟောင်: ဘူမိဘောအဒူလာဒက် ၏ ဈာပနာ အခမ်းအနားရှိသောကြောင့် 26 Oct 17 ရက်နေ့ တွင် ကစားကွင်းများ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ပိတ်မည် ဖြစ် ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်
မိုးရာသီ Promotion ကုန်ဆုံးတော့ မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရမ်းတန်တဲ့ ဈေးနှုန်းများ နဲ့ ဝင်ကြေး လန်မှတ် များကို ဘန်ကောက်သို့ လာရောက် လည်ပတ်ကြမည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ကြိုတင် ဝယ်ယူထားနိုင်ရန် အသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်
*** 15 September 2017 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပီး ဝယ်ယူကြဖို့ မမေ့ ပါနဲ့ နော် ***
ဘန်ကောက်မြို့နဲ့ ပတ္တရားမြို့မှာရှိတဲ့ ဝင်ကြေးလက်မှတ်များကို ထပ်မံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်..
Siam Park City (All Rides + Buffet Lunch) - ၅၀၀ ဘတ်
Art In Paradise- ၃၀၀ ဘတ်
Dinosaur Planet - ၄၀၀ ဘတ်
Sea Life Ocean World Only - ၆၀၀ ဘတ်
Sea Life Ocean World + 4D - ၇၀၀ ဘတ်
Madame Tussauds Only - ၅၀၀ ဘတ်
Sea Life Ocean World + Madame Tussauds + 4D Ice Age - ၈၅၀ ဘတ်
Sea Life Ocean World + Madame Tussauds +4D Ice Age + Ocean Feeding Boat - ၉၉၉ ဘတ်
New Calypso Cabaret Show- ၅၀၀ ဘတ်
New Calypso Cabaret Show + Thai Dinner + Thai Dance- ၇၉၉ ဘတ်
Baiyoke Sky Hotel Buffet Lunch - ၆၅၀ ဘတ်
Baiyoke Sky Hotel Buffet Dinner - ၇၅၀ ဘတ်
Siam Niramit Bangkok Show Only - ၉၉၉ ဘတ်
Siam Niramit Show + Dinner - ၁၂၉၉ ဘတ်
Chao Phraya Princess Dinner Cruise- ၉၅၀ ဘတ်
White Orchid River Dinner Cruise - ၉၅၀ ဘတ်
Candle Light Dinner Cruise - ၁၆၉၉ ဘတ်
Kidzania Bangkok ( Toddlers 2-3 Years Old) - ၅၅၀ ဘတ်
Kidzania Bangkok ( Kids 4-14 Years Old) - ၈၉၉ ဘတ်
Kidzania Bangkok ( 15 Years Old & Up) - ၅၅၀ ဘတ်
Alcazar Show (Deluxe & Standard Seat) - ၄၀၀ ဘတ်
Alcazar Show (VIP Seat) - ၅၀၀ ဘတ်
Cartoon Network Amazon Water Park Ticket only - ၁၁၀၀ ဘတ်
Cartoon Network Amazon Water Park Ticket+ International Set Menu - ၁၂၀၀ ဘတ်
Nong Nooch Garden (Admission Fee Only) - ၃၀၀ ဘတ်
Nong Nooch Garden (Admission Fee+Show) - ၄၀၀ ဘတ်
Nong Nooch Garden ( Admission Fee+Show+International Buffet) - ၇၀၀ ဘတ်
Nong Nooch Garden ( Admission Fee+Show+Thai Buffet) - ၅၅၀ ဘတ်
Mimosa Show - ၂၅၀ ဘတ်
Floating Market Pattaya + Boat - ၃၀၀ ဘတ်
Pattaya Par Tower Lunch or Dinner - ၅၀၀ ဘတ်
Siracha Tiger Zoo - ၃၀၀ ဘတ်
Frost Magical Ice Of Siam - ၃၅၀ ဘတ်
Under Water World Pattaya - ၃၀၀ ဘတ်
Art In Paradise Pattaya- ၃၀၀ ဘတ်
Viber No - +66873629036, +66971199711 သို့ Chat box မှ တစ်ဆင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
[06/20/17] မင်္ဂလာပါရှင် 😊😊😊
Limousine car hire service for private and vip transportation, Airport Transfer, Weddings, Travel and Sight seeing, Photo Shooting and Events.
บริการนำเที่ยว2ชั้น vip รถตู้ VIP
Bang Kachao, Pra Pradaeng
We create unique tours, experiences and events that will entertain and educate both the novice and the most discerning traveler.
บริษัท มงคลทูมูนทัวร์ แอนด์
เลขที่4อาคารบีมาลากรุ๊ป ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร9ซอย 14 แยก 8 แขวง หนองบอน เข
Our company goal is to bringatotal different experience inamore fun, luxury and stylish way to our client. From special arranged tour program down to tailor made trip to your dream destination. Just tell us when,where and how you want your trips
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก และบริการทำเอกสารขอวีซ่าประเภทต่างๆ ประกันการเดินทาง